Mutumbi waVaTsvangirai Unosvika kuBuhera uko Watambirwa neZviuru zveVanhu
Mutumbi wemutungamiri weMDC-T, VaMorgan VaTsvangirai wasvika kuBuhera, mudunhu reManicaland, kumadeuka zuva kweMuvhuro, uko waendeswa nechikopokopo chehurumende.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muKenya, reOrange Democratic Movement, VaRaila Odinga, vasvikawo muHarare kuti vaonekane nemumwe wavo.
Mhomho yevanhu inonzi yaungana ikoko kugamuchira mutumbi waVaTsvangirai, avo vari kutarisirwa kuradzikwa neChipiri mubhuku rekwaHumanikwa kwakare kuBuhera.
Mutumbi waVaTsvangirai usati waendeswa kumusha watanga wapfuudzwa nepamuzinda webato iri weHarvest House kuitira kuti veruzhinji vapiwe mukana wekuonekana nemutungamiri wavo.
Motokari yanga yakatakura mutumbi uyu yambomira kwemaminitsi gumi pamuzinda webato apa, ukazoendeswa kuFreedom Square, motokari dzichifamba zvishoma nezvishoma veruzhinji vachitora mifananidzo vamwe vachiimba. uko kwanga kwakaunga vamwe vanhu vakawanda
Vachitaura pamusangano weveruzhinji wekupedzisira wekuperekedza VaTsvangirai paFreedom Square, vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC-T, VaNelson Chamisa vaudza vatsigiri vebato kuti vachagadzirisana nevamwe vatungamiri mubato ravo kuti vaende kusarudzo dzegore rino vakabatana.
VaChamisa vati VaTsvangirai vaiva munhu aida kubatanidza vanhu vose ndosaka vakaita kuti vatungamiri vemapato anopikisa vabatane pasi peMDC Alliance kuti vaite chinhu chimwe chete musarudzo.
Vati vachaedza kuti vabatane nevatevedzeri vemutungamiri webato, Amai Thokozani Khupe naVaElias Mudzuri zvichitevera makakatanwa ari mubato ravo panyaya yekuti ofanobata chigaro chaVaTsvangirai ndiyani.
Zvichitevera kukandirana makobvu nematete kuri kuitwa muMDC-T panyaya yekuti achatsiva VaTsvangirai ndiyani, dangwe raVaTsvangirai, VaEdwin Tsvangirai, vakurudzira vari mubato iri kuti vabatane kuitira kuti vagokunda musarudzo uye vasiye mhuri ichichema baba vavo murunyararo.
Zvichakadai, VaChamisa vashora hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa nekupa ruremekedzo rwekutakura VaTsvangirai nechikopokopo chemasoja kuenda kumusha kwavo kuBuhera asi vakatadza kuvaremekedza vachiri vapenyu.
VaChamisa vatiwo vanoziva zvose zvaidiwa naVaTsvangirai sezvo vakafamba vose kubva muna 1999 pakavambwa MDC kusvikira VaTsvangirai vashaika.
Vati VaTsvangirai vangafara zvikuru kana Zanu PF ikabviswa muhutongi vachiti sebato, vakasiirwa gwara rekutevedzera naVaTsvangirai.
Ataura akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vari mutungamiri weZimbabwe People First, VaAgrippa Mutambara, vati semubatanidzwa vacharamba vakabatana sezvakasiya zvarongwa naVaTsvangirai.
VaTsvangirai vanotarisirwa kuradzikwa neChipiri masikati nenguva dza 2.